वीरताको थलो जितगढी किल्लाको यसरी फेरियो मुहार,फाेटाेफिचर-Nagarikaawaj.com
जितगढी प्रबेशका लागि ४ वटा गेट,विजयोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहाल आउने
कपिल ज्ञवाली/बुटवल,बैसाख ५।
बुटवलमा अवस्थित एतिहासिक युद्धस्थल जितगढीको मुहार फेरिएको छ । नेपाली बीरताको थलो जितगढी अंग्रेजसंगको युद्धमा नेपालले विजय हासिल गरेको सुरुङ सहितको प्रसिद्ध भूमि हो ।
किल्लाको कम्पाउन्डभित्रै रहेको नगरपालिका वडा १ को वडा कार्यालय र प्रहरी बिट,कभर्ड हल समेत हटाइएको छ । सो स्थानमा रहेका अब्यबस्थित संरचना र फोहोर समेत उठाइएपछि जीतगढीको मुहारमा चमक सहित स्वरुप नै फेरिएको हो ।
प्रदेश सरकारबाट जितगढी युद्ध संग्रहालय (बटौली संग्रहालय) स्थापनाका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुटवल उपमहानगरपालिकाले ८ फिट उचाइको तामाको पूर्णकदको शालिक र ९ फिट उचाइकै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा निर्माण गरिएको हो ।
अहिले उजिरसिंहको दक्षिणतर्फ फर्केको पूर्ण कदको शालिक जडान भएको छ । संरचना बनाउन ४४ लाख ५२ हजार ६ सय ८१ रुपैया लागतमा निर्माण कम्पनी हेभेन कन्स्ट्रक्सन प्रालिसंग उपमहानगरसंग ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार दीपक पुनले बताए ।
पूर्णकदको मूर्ति भने नेपाल हस्तकला संघका बालकृष्ण तुलाधर र राजु तुलाधर बाउछोराले बनाएका हुन् । यस्को लागत भ्याट बाहेक १५ लाख ५० हजार रहेको राजु तुलाधरले बताए ।
झण्डा राख्ने टावर र शालिक राख्ने अलग अलग बेसमेन्टको निर्माण गरिएको छ । टावरमा झण्डा जोड्ने काम भैसकेको छ ।
शालिक राख्न जमिनमाथि साढे दुई मिटर अग्लो र त्यसमाथि २५.७६ वर्ग मिटर उचाईको बेसमेन्ट बनेके छ भने झण्डा राख्न २५ वर्ग मिटर उचाईको बेसमेन्ट निर्माण सकिएको छ ।
जितगढी किल्लाको बेग्लै ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्व भएकाले यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५० लाख वजेट र यसपटक १ करोड वजेट विनियोजन गरी गुरुयोजना बनाइरहेको बुटवल उपमहाननगरपालिकाले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले ५० लाख वजेट विनियोजन गरेको हो ।
विजयोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहाल आउने
२०७६ वैशाख ७ गते बुटवलमा जितगढी विजय उत्सव मनाउने तयारी तीब्र पारिएको छ । उत्सव मनाउनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका,नेपाली सेनाको जबजंग गण,स्थानीयले निकै मेहनतका साथ सरसफाइ,रंगरोगन गरेर किल्लालाइ चिटिक्क पारेका छन् । सो गणका ३७ जनाले दैनिक रुपमा श्रमदान गरिरहेका छन् ।
जितगढी विजय उत्सव दिवसमा बुटवलस्थित जितगढी किल्लामा कर्णेल उजिरसिंहको पूर्णकदको शालिक र नेपालको झण्डा फहराउने तयारी गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रधानसेनापतिसहितको विशिष्ट टोली सहभागी हुनेछन् ।
अंग्रेजसंगको युद्धमा नेपालले विजय हासिल गरेको सम्झनामा जितगढीमा गतसालदेखि औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर विजयउत्सव मनाउन थालिएको हो ।
त्यतिबेला विश्वका धेरै ठाउमा विजय प्राप्त गरेको तत्कालिन अंग्रेज सेनालाई बुटवल जितगढीमा उजिरसिंह नेतृत्वको नेपाली सेनाले पराजित गरेको थियो ।
तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको दिन वि.सं. १८७२ वैशाख ७ गतेको सम्झनामा गतवर्षदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रुपमा विजय उत्सव दिवसका रुपमा मनाउन थालेको हो ।
जितगढी प्रबेशका लागि ४ वटा गेट बनाइएको छ । अब २ वटा खोलीने छ भने २ वटा आवश्यकताका आधारमा संचालनमा ल्याइने बुटवल १ का वडाध्यक्ष महेन्द्र लिगलले बताए ।
‘गुरुयोजना बनाउदै छौं ,कणेंल उजिर सिंहको नेतृत्वले युद्ध कसरी जित्यो,दुबैपक्षका सहिद कति भए,सबै झझल्को देखिने गरि काम गरेका छौं ’ लिगलले भने ।
बुटवल–१, मा रहेको यो ऐतिहासिक जितगढी किल्लालाई पुरातत्व विभागले आ.व. ०५५/५६मा उत्खनन सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला रोकिएको उत्खनन्लाई पुनः २०७० माघ ८ गतेदेखि पुनः सुरु गरिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरले बनाउन लागेको पर्यापर्यटन सहितको पर्यटन सर्किटमा आफुहरुले सहकार्य गर्ने स्थानीय रबिन्द्रगोपाल लाकौलले बताए ।
स्थानीय युवा अशोक राइले जितगढीको मुहार फेरिएपछि आफुहरुलाइ निकै खुसी लागेको सुनाए । गढी टोलका अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्-‘हामी निकै खुसी छौं,यस्को प्रचारप्रसार र ब्यापकता भए अबका दिनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको यहां ओइरो लाग्नेछ ।’
सबै तस्वीरहरु: कपिल ज्ञवाली/नागरिक आवाज ।